Bagteeriyada sababto jabto ayaa iska caabin ku sameysay laba nooc oo kamid ah qalajiyaasha – Barocaafimaad |
Waxaa marki ugu horeysay la arkay kiis xanuunka jabtada ah oo iska caabin ku sameysay dawooyinkii qalajiyaasha ahaa ee sida caadiga ah loogu daweyn jiray, arrintaan waxaa lagu arkay boqortooyada midowday. Ninka lagu arkay xanuunkaan iska caabinta sameeyay ayaa waxa uu xanuunkaan ka qaaday galmo uu lasameeyay haweeyneey ku nool Koonfurta Aasiya, sidaas waxaa yiri saraakiisha caafimaadka.
Arrintaan waa marki ugu horeysay ee la arko xanuunada lagu gudbiyo galmada oo aan lagu daweyn karin qalajiyaasha sida isku darka qalajiyaasha azithromycin iyo ceftriaxone, waxaa laga soo xigtay xaruunta caafimaadka bulshada ee Ingiriiska sida lagu sheegay wararka BBC.
Ninkaan aan la magaacabin ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu qaaday bagteeriyadaan iska caabinta sameysa bilowgi sanadkaan, saraakiisha caafimaadkana waxey dabagal ku sameeynayaan dad kale oo uu galmo la sameeyay si laisugu dayo xakameynta faafidda xanuunkaan iska caabinta kusameeyay dawooyinka qalajiyaasha.
Waa infekshan ku faafa galmada . Ragga wuxuu ka saameeyaa tubooyinka kaadida, dumarkana wuxuu ka saameeyaa ilmo mareenka iyo tubooyinka kaadida, waxay kaloo saameyn kartaa malawadka, futada, cunaha, iyo xubnaha ku jira miskaha, waxay kaloo si dhif ah kusaameyn kartaa indhaha.
Cudurka jabtadu malahan wax dhibaato ah hadii si dhaqsa ah loo daweeyo, laakin hadii aan la daweyn wuxuu horseedi karaa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah.
Cudurkaan wuxuu ku gudbaa galmada aan ammaanka aheyn ee lagu sameeyo afka, xubinta taranka dumarka iyo futada, waxaa unugul cudurkaan dadka galmada badan la sameeya dad kala duwan, waxyaalaaha badin kara in qofku uu galmo badnaado waxaa ka mid ah isticmaalka maandooriya yaasha.
Akhriso casharka jabtada oo dhameystiran
Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Xaruumaha Xakameynta Xanuunada ee Yurub ayaa isku raacay in kiiskaan uu yahay kii ugu horeeyay ee iska caabin ku sameeyo laba nooc oo qallajiyaasha kamid ah. Khubarada caafimaadka ayaa baqdin ka qaba in xanuunkaan uu iska caabiyo nooc walbo oo qalajiyaasha kamid ah, arrintaan ayaa waxey tilmaameysaa sida ay wax kaqabasho la’aan usoo wajahi karto xanuunada kadhasha bagteeriyada, waana kiis walaac ku haya hay’adaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta.
Xigasho: BBC News